Mercury series High Frequency uhlolwe leposiibonelela leposi / Tower ifomu into ukulingana bume ezahlukeneyo. Ideal ezinoxinano ukhuseleko lwamandla ibango, Nangona imizila compact, lo UPS ifaka Imiqulu ibhetri lwangaphakathi zingafumaneka nge lenjongo ephambili ukuba iitshekhi ulondolozo kunye nokutshintshwa ngaphandle kokususa UPS lowo kwindawo yayo yokubeka. Iqela lenjongo LCD ukubonisa kube lula kwatshintsha ngokucinezela amaqhosha ukuze kulungele ifomati ufakelo, nkgqo ukuma okanye lenqaba adala entabeni. Ngapha koko, abasebenzi IT uyakwazi ukulawula izixhobo kakuhle zezifundo ezishiyekileyo ulwazi ixesha elilalela nge yombhalo wangoku okhethiweyo.
Eyonayona uyilo kabini-ukuguquka, Mercury series uyasikhusela enamandla jikelele izixhobo zakho ezibuthathaka. Kunokuba ukwamkela banzi ombane igalelo kokusingqongileyo ngqwabalala. Yinto ukhuseleko ogqibeleleyo kubancedisi be zakho ezixabisekileyo workstations.
2. Pure imveliso wave sine
Ezimsulwa sine imveliso yomtshangatshangiso, uqinisekisa ukuhambisana for zonke iindidi zemithwalo. Its ukhuseleko amandla ogqibeleleyo izicelo ubhetyebhetye ezifana uthungelwano, zothungelwano kunye nezinye izicelo mission-ezibalulekileyo.
Mercury series uyakwazi ukunika amandla esitalini kumacebo enxulumene phantsi imeko lwamandla ezingazinzanga.
5. Isiphumo amandla factor 0.8
Kuthelekiswa UPS online kwimarike lwangoku, Mercury series UPS ibonelela ngcono imveliso amandla factorup ku 0.8. It inikeza ukusebenza ephakamileyo effciency zokusebenza ezibalulekileyo.
operation mode 6.ECO for okonga umbane
7. Emergency Power Cima (EPO) Umsebenzi
8. USB + RS232 + RJ45 + SNMP unxibelelwano ezininzi imifuziselo 1-3K
• Humanized ukubonisa panel kunye jikwa LCD screen
panel Front ne LCD screen, ukubonisa ngokuzibonela ngendlela yamanani kunye nemizobo njl, LCD screen unako ejikelezayo ngokukhululekileyo, yaye LCD ukubonisa kunokuba ingqinelane ukuba zombini ufakelo lwe Tower okanye leposi imvelaphi inyuselwa uhlobo UPS.
• leposi / Tower Uhlobo Design
Indlela ukufakelwa ntsimbi zilapha phezulu nenqaba amahla kuba utshintshe nje ngendlela engaqondakaliyo, ezinye zibe malunga nezinye izinto kunye stents neenqaba amahla ukuba umgangatho random efunekayo, kulula ukuba ngokukhetha ngabasebenzisi.
• uhlolwe nga sidityaniswe kwi computer nge USB okanye Rs232 interface. Ngoko ke, kubonakala LAN esweni ngeeseti omnye okanye abaninzi UPS, liphinde kungaba esweni ezinye namahla leyo edityaniswe kwi computer nge LAN.
High Frequency uhlolwe leposi
100% ~ 110%: isilumkiso oluvakalayo
110% ~ 130%: UPS amvalele phantsi imizuzwana 60 imowudi ibhetri okanye ukudluliselwa yokucima xa eluncedo kuyinto eqhelekileyo
> 130%: UPS amvalele phantsi ngoko nangoko xa imowudi ibhetri okanye ukudluliselwa ukuya kwimo bypass xa eluncedo kuyinto eqhelekileyo
iiyure 4 ukubuyisa kwi 90% amandla
Ubuninzi Mercury Series High leposi UPS 1KVA-10KVA
Previous: 10-20KVA High Frequency UPS leposi (3: 1) Okulandelayo:20KVA-210KVA EZIIMODYULI UPS
6-10KVA High Frequency UPS leposi